Ururka Al-Shabaab oo Weeraray Laba Hoteel kuyaala magaaladda Muqdisho | SAHAN ONLINE
Ururka Al-Shabaab oo Weeraray Laba Hoteel kuyaala magaaladda Muqdisho
Ururka al-Shabaab ayaa xalay laba weerar ku qaaday labada hoteel ee Weheliye iyo Siyaad ee magaaladda Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir.
Kooxda Shabaab ee weerarka ku qaaday Hoteel Weheliye ayaa ku weeraray qarax baabuur ka dibna damcay iney gudaha u galaan balse uma suurtagelin taasoo ay ka hortageen ilaaladii hoteelka iyo kuwa dawladda.
Wasiirka Kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda ee Dawladda Federaalka Maxamed Cumar Ceymooy ayaa sheegay in xiliga weerarku dhacay ku jiray gudaha Hoteelka isaga iyo wasiiro,xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dawladda.
Daqiiqado ka dib markii uu dhacay weerarka hotel Weheliye ayaa weerar kaasi lamid ah mintidiinta al-Shabaab ku qaadeen Hotel Siyaad iyagoo adeegsanaya baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo dabley hubeysan oo gudaha u gashay Hotel-ka.
Dadka waxyeeladu kasoo gaartay weerarka al-Shabaab ayaa la geeyey Isbitaalada Magaaladda Muqdisho halka lasoo sheegayo in la laayey kooxdii weerarka soo qaaday.
Faah-faahinta kala soco SAHANONLINE.COM